Soomaali Ka Carartay Colaada Yemen Oo Gaaray Boosaaso “Sawirro” – Radio Muqdisho
Soomaali Ka Carartay Colaada Yemen Oo Gaaray Boosaaso “Sawirro”
Dekadda magaalada Boosaaso waxaa ku soo xiratay doon waday qaxooti badan oo Soomaaliyeed, oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen, iyagoo ay ka muuqato dhibaatooyin xaga nolosha ah.
Dadkani maanta gaaray Boosaaso oo Tiradoodu ahayd 1,723 ruux oo kala ahaa; 763 oo caruur ah, 581 oo Haween ah iyo 379 oo Rag ah ayaa waxaa ka muuqday diif iyo daal, kuwaasi oo kasoo kala baxay magaalooyinka Sanca, Cadan, Ticish iyo Mukallah.
Soo dhaweynta Dadka Soomaaliyeed ee ka soo cararay Dagaalada Yemen ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay Mas’uuliyiin maamulka Puntland gaar ahaan Mas’uuliyiinta maamulka gobolka Bari iyo kan magaalada Boosaaso.
Qoxootiga maanta gaaray Boosaaso oo qaarkood la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay inay dhibaatooyin badan las oo kulmeen intii ay ku soo jireen badda, iyadoo qaarkood ay sheegeen in tobaneeyo qof ay ku dhex-dhinteen doonida, waxaana sida Sawirada aad ka arkeysaan ku jira Dad da’ah iyo caruur ay ka muuqato Diif.
Sidoo kale Dadkii maanta gaaray magaalada Boosaaso ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladda Yemen ay aad u Xumaatay, iyagoo sheegay in ay ku noolyihiin dadkii ay ka soo tageen dhibaatooyin badan oo aan la soo koobi karin qaarkood xitaa aysan heysan qarashaad doon ay ku soo raacaan.
“Maalin walba waxaan saf u galaynay shan xabo oo Muufo ah si aan aniga iyo caruurteyda ugu noolaano, biyo ma jiraan, guryaha ayaan ku Xirnayn; duqeyntuna waxay ahayd habeen iyo maalin, waxaan go’aannsanay inaan dib ugu soo laabanno dalkenna,” ayay tiri Laylo oo warbaahinta kula hadashay Boosaaso.
Dadka Soomaaliyeed ee Ku nool Dalka Yemen oo ay colaada ka jiraan ayaa waxaa halkaasi ku heysta dhibaatooyin kale duwan oo ay ugu horeyso mida Nolosha iyo tan hoyga, waxaana dadkaasi badankoodu ay yihiin kuwa aan ka soo baxsan karin colaadahaasi sababa la xiriira qarashaadka doomaha ay ku soo raacayaan oo aynan heysan, walow dadkaasi qaarkood ay ka soo baxsadeen colaadahaasi, Waxaana Dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirtaa sidii muwaadiniintaasi ay ugu soo samata bixin laheyd dhibka ka jira wadanka Carbeed ee Yemen.